Shir madaxeedka AfricaOSH 2020 - AfricArXiv
Published by Jo Havemann on 11th February 2020 11th February 2020
Dib u soo noqoshadii bishii Abriil 2018, fikradda ah in la dhiso kaydka bakhaar Afrika ee furan ayaa ku dhashay shirkii ugu horreeyay ee AfrikaOSH ee lagu qabtay Kumasi, Ghana.
Daah-ka-qaadista waxay ku baxday Ingiriisiga Tilmaanta Nature, Quartz Africa, AuthorAID, iyo af faransiis Afro Tribune iyo mail International.
Waxaan ku faraxsanahay inaanu shaaca ka qaadno, in shir sannadeedka sannadkan ee AfricanOSH lagu qaban doono Yaounde, Cameroon, aan ku marti qaadi doonno wadada loo yaqaan 'Open Access track'.
Waxaa diirada la saaraa DIYBio & Joogtaynta sanadka 2020
Shirka OSH ee Afrika 2020 waxaa lagu qabanayaa Yaounde, Cameroon, laga bilaabo 14 ilaa 16 May 2020, hoos ka daawo muuqaalka 'Kobcin Sameynta Isku-Samee Naftaada & Sameyn-Wadajir (DIY / DIT) Dhaqanka Isbadalka Bulshada'. Waxaa marti ku ah Shaybaarka Mboa.
Shirku wuxuu martigelin doonaa aqoon-isweydaarsiyo, wadahadallo iyo shirar ku saabsan samaynta, jabsiga iyo DIYBio oo loogu talagalay daneeyayaal fara badan si ay uga hawlgalaan habraaca naqshadeynta, iskaashiga, xalinta dhibaatada. Intaa waxaa sii dheer, kaqeybgalayaashu waxay ku howlan yihiin sidii dhaqdhaqaaqa sayniska & dhaqdhaqaaqa furan uu gacan uga geysan lahaa isbedelka waarta ee Afrika. Ugu dambeyntii waxaan higsaneynaa inaan gaarno deegaanka noolol-abuur ah oo deegaanka lagu waafaqay, dhaqan ahaan la xiriira, farsamo ahaan la aqbali karo, dhaqaale ahaan lagu noolaan karo, iyo deegaanka waara
Ka akhriso inbadan oo kusaabsan AfricaOSH at africaosh.com.
Furan Wadada loo maro
Sannadkan, xubno ka tirsan kooxda AfricanArXiv waxay fududeyn doontaa Wadada loo maro Fursadda Furan ee loo yaqaan 'Open Access track' ee AfrikaOSH.
Waxaan la wadaagi doonnaa ajendaha iyo faahfaahinta raadadkaas iyo sidoo kale macluumaad horudhac ah iyo ilo ku saabsan mowduucyada ku wareegaya furitaanka 'Open Access' ee macnaha guud ee Afrika ee ku saabsan is-dhexgalka tacliinta iyo qaybaha kale.
Waxaan abaabul olole lacag aruurin ah ka sameyneynaa barta internetka eecolcoliveive.com.
Wadajir Furan waa madal ay bulshooyinku isugu ururin karaan oo ku bixin karaan lacag si cad, si ay u sii wadaan una kobciyaan mashaariicdooda.
Ku-biirintaada waxay ku socon doontaa:
oo daboolaya kharashyada safarka & hoyida xubnaha kooxda AfricanArXiv
qorshaynta, fududeynta, iyo dokumentiga marinka 'Open Access track'
guud ahaan maamulka iyo taakuleynta saadka ayaa taageeray kooxda abaabulka ee AfricaOSH ee dalka Cameroon
Safarka ayaa ku sii qulqulaya kaqeybgalayaasha AfricaOSH ee la xushay
Ku saabsan AfricaOSH
Shirka Afrika ee Cilmiga Sayniska iyo Qalabka (Africa OSH) waa dadaal guud oo la isugu keenayo cilmi baarayaal, farsamo yaqaanno, hiwaayadaha wax barta, aqoonyahannada, mas'uuliyiinta dowladda, iyo hal-abuurayaasha cusub ee adduunka. | africaosh.com
Categories:	EventFuran FuranSayniska Furan
Tags: AfricaOSHDIYbioQalabka Sayniska ee Furanwaaritaanka
Khidmadaha adeegga ee loogu talagalay martigalinta iyo dayactirka qorraxda ee OSF - AfricanArXiv way sii wadaa adeegyadeeda
'Adeegsadayaasha caanka ah ee iibiyaasha ayaa wajahaya xidhitaanka sababtuna waa dhibaato lacageed' Nature News, 1 Feb 2020, doi: 10.1038 / d41586-020-00363-3 Tani waa cinwaanka maqaalkii shalay Nature News kaas oo ka hadlay khidmadaha adeegga OSF. AfricArXiv waa kan halkaan Akhri wax dheeraad ah…
Horraantii Disembar 2019, Prof Abukutsu-Onyanko wuxuu ku soo bandhigay shaqadeedii UTC-SPARC Africa Open Access Symposium 2019 Symposium oo ku taal Cape Town, South Africa. Eeg soo bandhigida Zenodo: Qiyaastii toban sano kahor, Leslie Chan ayaa wareysatay Akhri wax dheeraad ah…